လက်ကား LED အလှဆင်မီးများ, LED Light Fixtures ပေးသွင်း | ကြီးကျယ်ခန်းနားသည်။
2003 ခုနှစ်ကတည်းက ပရော်ဖက်ရှင်နယ် LED အလင်းရောင်ထုတ်လုပ်သူ
Led Rope Light ၊
Led String Light ၊
ခရစ္စမတ် Motif အလင်း
Ultra Soft Led Strip Lights စီးရီးများ
ဦးဆောင် Neon Flex စီးရီး
ကြိုးမဲ့ Led Strip Light စီးရီး
Crystal Jade Led Strip Light စီးရီး
Csp Strip & Neon Flex စီးရီး
LED အလှဆင်မီးများ လှေကားထစ်များ၊ ပါတီများ၊ အပြင်ဘက်နှင့် နံရံများကို အလှဆင်ရာတွင် မကြာခဏ အသုံးပြုကြပြီး အမျိုးမျိုးသော လုပ်ငန်းများတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုကြသည်။ LED အလှဆင်မီးများသည် အရောင်အသွေးကြွယ်ဝပြီး စွမ်းအင်ချွေတာပြီး တာရှည်ခံသောကြောင့် ၎င်းတို့သည် အလှဆင်လုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးတွင် ရေပန်းစားသော ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ အခုဆို လမ်းပေါ်မှာ လမ်းလျှောက်လာရင်း အပြင်မှာ အလှဆင်ထားတဲ့ LED မီးတွေကို နေရာတိုင်းမှာ တွေ့နေရတယ်။ အထူးသဖြင့် သစ်ပင်များပေါ်ရှိ LED ကြိုးအလှဆင်မီးများနှင့် LED ပိုက်ကွန်နတ်သမီးကြိုးတန်းအလှဆင်မီးများသည် ညဘက်တွင် ရှုခင်းသာဖြစ်သည်။
ကြီးကျယ်ခန်းနားသည်။ LED အပြင်ဘက်အလှဆင်မီးများ၊ LED နံရံအလှဆင်မီးများ၊ LED အိမ်တွင်းအလှဆင်မီးများ၊ LED တွဲလောင်းအလှဆင်မီးများ၊ LED မျက်နှာကျက်အလှဆင်မီးများ စသည်တို့အပါအဝင် LED အလှဆင်မီးအမျိုးအစားအမျိုးမျိုးကို လက်ကားရောင်းချပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် LED အလှဆင်မီးများကို 18 နှစ်ကြာထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်သုတေသနတွင်အထူးပြုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးဖောက်သည်များအားအကောင်းဆုံး LED အလှဆင်မီး LED strip lights solutions များကိုပေးဆောင်ရန်အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးကုန်ကြမ်းများကိုအမြဲတမ်းအသုံးပြုခဲ့သည်။
အရည်အသွေးမြင့် LED အလှဆင်အလင်းရောင် လက်ကား-GLAMOUR OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD.
စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသော LED အလှဆင်မီးများ လုပ်ငန်းတွင် ၁၈ နှစ်ကြာ လုပ်ကိုင်လာခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားများတွင် LED ကြိုးအလင်း၊ LED ကြိုးမီး၊ LED နီယွန်ကြိုးများ၊ SMD ချွတ်အလင်း၊ LED မီးသီးများ၊ LED motif အလင်းစသည်တို့ ပါဝင်ပါသည်။ အဓိကထုတ်ကုန်များတွင် CE၊ GS၊ CB၊ UL၊ cUL၊ ETL၊ CETL၊GLAMOUR အရည်အသွေးမြင့် LED အလှဆင်မီးလုံး လက်ကား-GLAMOUR OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD.၊Glamour သည် ယခုအချိန်အထိ မူပိုင်ခွင့် 30 ကျော် ရရှိထားပြီး
အကောင်းဆုံး LED Strip မီးများ FactoryPrice-GLAMOUR
Glamour LED Strip Light သည် ရိုးရာ LED Strip Light ၏ အဆင့်မြှင့်တင်ထားသော မျိုးဆက်ဖြစ်သည်။၎င်းသည် ယူနစ်အပိုင်း မီးပိတ်ခြင်းနှင့် PCB အရေးအကြောင်း ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းပေးသည်။၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အား အော်ဒါများနှင့် နာမည်ကောင်းများစွာရရှိစေရန် ကူညီပေးသည့် ကြီးမားသော အရည်အသွေးမြှင့်တင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။အထူးအတွင်းခန်းဖွဲ့စည်းပုံသည် ယခင်ကထက် ပိုမိုပျော့ပြောင်းပြီး တည်ငြိမ်စေသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် CE၊ CB၊ GS၊ RoHs၊ REACH၊ UL၊ cUL၊ ETL၊ cETL စသည်တို့ကို ရရှိထားပါသည်။
ကြီးကျယ်ခန်းနားသော ဒီဇိုင်းအသစ် အပြင်ဘက်အလင်းရောင်- ရောင်းမထွက်&အရည်အသွေးမြင့်-All In One Solar Street Light - SL01 Series1. Monocrystalline Silicone Solar Panel၊ 6-8 နာရီအတွင်း အလွန်လျင်မြန်သော အားသွင်းချိန်၊2. MPPT ဆိုလာအားသွင်း၊ အလုပ်လုပ်ချိန် 10-12 နာရီ၊3. 130lm/W မြင့်မားသော lumen ထိရောက်မှု;4. PIR အာရုံခံထိန်းချုပ်မှု, induction range 6-8M;5. အဝေးထိန်းခလုတ်၊ အလင်းထိန်းချုပ်မှု သို့မဟုတ် PIR ထိန်းချုပ်မှု ရရှိနိုင်သည်။6. ရေစိုခံ IP65၊ ဝါယာကြိုး တပ်ဆင်ခြင်း မရှိပါ။7. အလွန်အပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်းများ။8.5pcs/ပုံး;9. With manual;10.Designed အတွင်းပိုင်းသေတ္တာနှင့်ပုံး11.2 နှစ်အာမခံ
စွဲမက်ဖွယ်အလင်းရောင်- Indoor Light ထုတ်ကုန်များ
Glamour သည် တရုတ်နိုင်ငံတွင် ပေါင်းစပ်ပလတ်စတစ်အကန့်အလင်းကို ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူအဖြစ် လူသိများပြီး၊ ၎င်းသည် အပူကို စွန့်ထုတ်ရန်အတွက် အပူချိန်မြင့်မားသော ပလပ်စတစ်အိမ်နှင့် အလူမီနီယံပြား၊ အရည်အသွေးမြင့် LED ချစ်ပ်များနှင့် အဆင့်မြင့် ယာဉ်မောင်းဖြေရှင်းချက်တို့ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Glamour Panel အလင်းအားလုံးသည် ကိုယ်ပိုင်မှိုနှင့် မူပိုင်ခွင့်ရရှိထားသော အလင်းရောင်ထုတ်ကုန်များဖြစ်သည်။စွဲမက်ဖွယ်အလင်းရောင်- Indoor Light ထုတ်ကုန်များသည် ဘေးမီးနှင့် နောက်မီးများပါရှိသော LED panel light များကို အဓိကအားဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားသော၊၊ အောက်ခြေနှင့် မျက်နှာပြင် panel နှစ်ခုစလုံးကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ဘေးဘက်အလင်းအတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် SPL ရှိသည်။&SPF စီးရီး၊ NPL&NSF စီးရီး,;နောက်မီးအတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ADL ရှိသည်။&ADS စီးရီး၊ DLC စီးရီး၊ EDL စီးရီးနှင့် RDL စီးရီး၊ထို့အပြင် ADL စီးရီးများသည် ဖြတ်တောက်နိုင်သော ချိန်ညှိနိုင်သော ဒီဇိုင်းဖြစ်သည်။SPL၊ DLC& EDL စီးရီးများသည်2in 1 ဒီဇိုင်းဖြစ်ပြီး အောက်ခြေကို မျက်နှာပြင်တပ်ဆင်ရန် လွယ်ကူစွာ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
RGB စီလီကွန် LED အမြှေးပါး 60 leds/m IP68 5m/10m အဝေးထိန်းခလုတ်
RGB ဆီလီကွန် led strip သည် ၎င်း၏ နှိုင်းမဲ့ ရေစိုခံ IP68 နှင့် သာလွန်သော ထုတ်ကုန် အရည်အသွေးကြောင့် ယခု ခေတ်စားလာပါသည်။ရေစိမ်ခံမှုနှင့် ၎င်း၏ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို တိုးမြှင့်ရန်အတွက် ဆီလီကွန်ကို ကန့်လန့်ဖြတ်မီးလုံးတွင် ဖြည့်ထားသည်။ဤမျိုးအတွက် ကျွန်ုပ်တို့တွင် ရွေးချယ်စရာ နှစ်ခုရှိသည်၊ တစ်ခုမှာ 30 leds/m နှင့် အခြားတစ်ခုသည် 60 leds/m ဖြစ်သည်။ဘာက ကျွန်တော်တို့ကို ကွဲပြားစေတာလဲ။1. တစ်ထုပ်လျှင်5မီတာ / 10 မီတာ၊ ရောင်စုံသေတ္တာ ပက်ကေ့ဂျ်ကိုလည်း လက်လီရောင်းချနိုင်ပါသည်။2. ဖုန်ကင်းစင်သော SMT အလုပ်ရုံ၊ အလိုအလျောက် စီးဆင်းမှုလိုင်းနှင့် စမ်းသပ်ဓာတ်ခွဲခန်းများသည် အရည်အသွေးကို အာမခံပါသည်။3. ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၊ စိတ်ကြိုက်တောင်းဆိုမှု၊ ရောင်းချမှုအပြီးတွင်၊ စသည်တို့အတွက် စိတ်ပူစရာမလိုသောဝန်ဆောင်မှု။4. အတွေ့အကြုံ 19 နှစ်၊ စက်ရုံ 50,000㎡ နှင့် ကျွမ်းကျင်လုပ်သား 1000+5. အခမဲ့နမူနာ ရရှိနိုင်ပါသည်။
စိတ်ကြိုက် ကြီးကျယ်ခန်းနားသော နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး လမ်းမီး မိတ်ဆက် ထုတ်လုပ်သူ China | ကြီးကျယ်ခန်းနားသည်။
ဤဗီဒီယိုတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး လမ်းမီးကို ပြသပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အလင်းရောင်လုပ်ငန်းတွင် ၁၈ နှစ်ကျော်ကြာ အပ်နှံထားခဲ့သည်။ဒီလိုမျိုး ထုတ်လုပ်မှုမှာ အားသာချက်တွေ အများကြီးရှိတယ်။ ရှာကြစို့။
ပေးသွင်းသူနှင့် ထုတ်လုပ်သူ | ကြီးကျယ်ခန်းနားသော အလင်းရောင်
DL45 LED မီးသီးများ
LED မီးသီးများ- 1. တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် အစားထိုးခြင်းအတွက် လွယ်ကူခြင်း။ 2. ပါဝါသုံးစွဲမှုနည်းပြီး စွမ်းအင်ချွေတာခြင်း။ 3. ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော၊ နှင်းခဲများနှင့် ရောင်စုံဦးထုပ်များအားလုံးကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ 4. အိမ်၊ ပါတီ၊ ဘား၊ ကလပ်၊ စူပါမားကတ်၊ ရုံးခန်း၊ ဟိုတယ်၊ ရှိုးခန်း၊ ပြတင်းပေါက်အလှဆင်ခြင်းအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ 5. ခါးပတ်အလင်းနှင့် ပေါင်းစပ်ပါက၊ ၎င်းကို အကြီးစားသို့ အသုံးချနိုင်သည်။ လှပပြီး မွန်မြတ်မှုကိုပြသသော လမ်းအလှဆင်ခြင်းအတွက် ရည်ရွယ်ချက်များ။ 6. CE အတည်ပြုချက်
ဆီလီကွန် LED အမြှေးပါး 180 leds/m 5m/10m အထုပ် IP68 ရေစိုခံ
24V ခရစ္စမတ်သစ်ပင် Arch LED Motif မီးများ စက်ရုံ - ကြီးကျယ်ခန်းနားသည်။
ထုတ်ကုန်များကို 24V RGB ဗီဒီယိုကြိုးမီးများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် အကျိုးသက်ရောက်မှု အလွန်လှပပါသည်။ 24V ဖြစ်သောကြောင့် လူ့ခန္ဓာကိုယ်နှင့် ထိလျှင်ပင် အန္တရာယ်မရှိပါ။ထုတ်ကုန်သည် အပြည့်အဝ ရေစိုခံ IP65 အဆင့် ပစ္စည်းဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် အေးသော ဆောင်းရာသီတွင်ပင် အပြင်ဘက်တွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ထုတ်ကုန်သည် ထုပ်ပိုးမှုပမာဏကို သက်သာစေပြီး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုန်ကျစရိတ်ကို သက်သာစေသည့် ဖြုတ်တပ်နိုင်သော ဒီဇိုင်းကို လက်ခံထားသည်။ထုတ်ကုန်၏ထုတ်လုပ်မှုရက်စွဲသည် ရက် 30 မှ 40 ရက်အတွင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား အမြန်ဆုံးထုတ်လုပ်မှုကို ပေးပါမည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်များ၏ သက်တမ်းသည် တစ်နှစ်ဖြစ်သည်၊ သင့်တွင် မေးခွန်းများရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
ဆီလီကွန် LED အမြှေးပါး SMD3835 120 leds/m IP68 ရေစိုခံ
IP67 ဆီလီကွန် LED အကွက် SMD 2835 60 leds/m 5m/10m
Silicone led strip သည် ၎င်း၏ နှိုင်းမဲ့ ရေစိုခံ IP68 နှင့် သာလွန်သော ထုတ်ကုန် အရည်အသွေးကြောင့် ယခု ခေတ်စားလာပါသည်။ရေစိမ်ခံမှုနှင့် ၎င်း၏ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို တိုးမြှင့်ရန်အတွက် ဆီလီကွန်ကို ကန့်လန့်ဖြတ်မီးလုံးတွင် ဖြည့်ထားသည်။